HITANAO ve izay mitranga eto? Lehilahy mpanafika eo amin’ny Israely avokoa ireo. Ireo lehilahy izay miondrika dia misotro rano. I Gideona mpitsara ilay lehilahy mitsangana eo akaikin’izy ireo. Eo am-pandinihana ny fomba fisotron’izy ireo rano izy.
Jereo akaiky ny fomba samy hafa fisotron’ireo olona ireo. Ny sasany dia manatsoboka ny tarehiny mihitsy ao anaty rano. Ny anankiray kosa dia mandray ny rano amin’ny tanany ka noho izany dia afaka mandinika izay mitranga manodidina azy. Zava-dehibe izany, satria i Jehovah dia nilaza tamin’i Gideona mba tsy hifidy afa-tsy ireo lehilahy izay manohy miambina na dia eo am-pisotroana aza. Ny sisa, hoy Andriamanitra, dia tokony halefa hody any aminy. Aoka hojerentsika hoe nahoana.
Tao anatin’ny fahasahiranana indray ny Israelita. Ny antony dia satria tsy nankatò an’i Jehovah izy. Nahery teo amin’izy ireo ny Midiana ary nampahory azy. Koa dia nitaraina tamin’i Jehovah ny Israelita, ary nihaino ny fitarainany i Jehovah.
Nilazan’i Jehovah i Gideona mba hamory tafika iray, ka dia nanangona lehilahy mpanafika 32 000 i Gideona. Nefa tafika iray nisy lehilahy 135 000 no hanafika ny Israely. Mbola nilaza tamin’i Gideona anefa i Jehovah hoe: ‘Maro loatra ny olonao.’ Nahoana moa i Jehovah no niteny toy izany?
Satria raha maharesy amin’ny ady ny Israely, dia mety hieritreritra fa noho ny heriny no nahazoany fandresena. Mety hieritreritra izy ireo fa tsy nila ny fanampian’i Jehovah mba handresena. Hoy àry i Jehovah tamin’i Gideona: ‘Ilazao ny lehilahy rehetra izay matahotra mba hiverina.’ Rehefa nanao izany i Gideona, dia lehilahy mpanafika 22 000 no nody. Lehilahy 10 000 sisa tavela ho azy mba hiady amin’ireo miaramila rehetra 135 000.
Mpitsara 6-8 toko faha-6 ka hatramin’ny faha-8.
Hizara Hizara Gideona sy ny Olony 300 Lahy
my tant. 52